XOG: Shan Sababood Oo Manchester United Ku Eryi Karto Jose Mourinho Iyo Xogaha Qarsoon Ee Gudaha Old Trafford - GOOL24.NET
XOG: Shan Sababood Oo Manchester United Ku Eryi Karto Jose Mourinho Iyo Xogaha Qarsoon Ee Gudaha Old Trafford
July 31, 2018 Cabdiwahab Ahmed
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la sheegay inay ka fikirayso inay shaqada ka caydhiso tababare Jose Mourinho oo ismaan-dhaaf u dhexeeyo, isla markaana ciyaartoyga naadiga aanay isku niyad-samayn.
Jose Mourinho ayaa dhowaan sheegay in dhawr ciyaartoy oo uu dalbaday xagaagan aan loo keenin, taasina ay adkayn karayso inay u tartamaan horyaalka sannadkan, isagoo dhinaca kalena tilmaamay in Liverpool ku guuleysan doonto, waxaanay taasi cadho badan ka keentay jamaahiirta Red Devils oo si adag u diiday hadalkaas, halka maamulka kooxduna uu war-saxaafadeed kasoo saaray.
Waxa intaas dheer in qaar ka mid ah ciyaaryahannadu ay doonayaan inay ka tagaan Manchester United sabab la xidhiidha tababaraha, waxaana xiddigahaas ugu horreeya Paul Pogba iyo Martial.
Haddaba, waxay aanu halkan idiinku soo bandhigaysaa shan sababood oo Manchester United ku khasbi karaya inay caydhiyaan tababare Jose Mourinho:
Lacag badan oo uu kharash gareeyey: Iyadoo aanu xili ciyaareedkuba bilaabmin, ayaa uu tababare Jose Mourinho horyaalka u caleemo saaray naadiga Liverpool oo ay cadaawad weyni ka dhaxayso. Waa run in Liverpool ay ciyaartooyo badan soo iibsatay xagaagan, hase yeeshee, waxa uu Mourinho ilowsan yahay in tan iyo markii uu Manchester United yimid badhtamaha sannadkii 2016 uu kharash gareeyey lacag dhan £392.55 milyan oo uu ciyaartooyo kusoo iibsaday.
Dhinaca kale, Liverpool waxay muddadaas kharash garaysay lacag dhan £411.5 milyan, hase yeeshee waxay soo celisay ciyaartooyo ay kasoo xeraysay lacag dhan £289.65 milyan, taas oo ka dhigan in ay ka baxday lacag dhan £121.9 milyan oo kaliya. Taas beddelkeeda, Manchester United waxay ka heshay ciyaartooyadii ay iibisay £85.3 milyan oo kaliya, waxaana iskugeyn lacagta ka baxday ee aan usoo noqonin ay tahay £307.25 milyan oo aan weli ka muuqanin qaab ciyaareedka kooxda. Iyadoo lacagta intaas le’eg kaga maqan tahay United suuqa iibka laba sannadood gudahood, ayaa waxa uu haddana raadinayaa lacag badan oo kale oo uu ciyaartooyo kusoo gato.
Da’yartii Kooxda oo uu dareerinayo: Markii Manchester United uu tababaraha u ahaa Alex Ferguson, waxay kooxdu caan ku haayd ciyaartooyo kasoo baxay kulliyadooda da’yarta oo noqda xiddigo waaweyn oo guulo gaadhsiiya, laakiin Mourinho waxa taariikhda ugu jirta in aanu weligiiba jacaylin dhallinyarada yaryar ee soo baxaysa, waxaana uu mar walba raadiyaa laacibiin waaweyn.
Marcus Rashford, Anthony Martial, Matteo Darmian iyo Luke Shaw oo ka mid ah da’yarta kooxda ayaa Mourinho uu madaxa kaga istaagay, kana diiday inuu fursado siiyo, sidoo kalena kuwa kale ee soo baxaya ayaan rajo ka qabin.
Koob La’aan: Jose Mourinho markii uu Manchester United la wareegay, wuxuu taageereyaasha iyo warbaahintaba u sheegay in aanay sannadka hore ka filanin wax koobab ah, laakiin sannadka labaad uu koobab u keeni doono. Sidaasi waa sidii uu ka sameeyey kooxihii uu hore usoo layliyey oo dhan, laakiin Manchester United wali ugamay suurtogelin, waxaana uu illaa hadda kula guuleystay EFL Cup iyo Europa League oo kaliya.
Xili ciyaareedkii guulaha laga filayey ee 2017-18 kuma guuleysanin wax koob ah, xili ciyaareedkana lagama filayo inuu wax keeno, sababtoo ah koox walba oo uu hore usoo layliyey, sannadaha dambe hoos u dhac weyn ayaa ku yimaadda, illaa laga eryayana hoos ayey usoo socotaa.
Qaab-ciyaareed la’aan: Jose Mourinho waa macallin farsamo badan, taariko adag isticmaala, hase yeeshee waxa uu aaminsan yahay in ciyaartu ka socoto khadka dhexe oo uu mar walba awoodda saaro. Dhamaan kooxihii uu soo maray, waxa uu u habeeyey qaab ciyaareed ku dhisan weerar rogaal celis degdeg ah iyo khadka dhexe oo awoodda la saaro, hase yeeshee Manchester United wali ugamay suurtogelin inuu qaab ciyaareed u gaar ah kusoo kordhiyo.
Manchester United waxay filaysay in sida Pe Guardiola iyo Jurgen Klopp ay qaab ciyaareed u gooni ah oo markiiba ay ka hirgeliyeen kooxahooda, hase yeeshee Mourinho weli lagama hayo, waana caqabad jamaahiirta iyo maamulkuba ay ku qaniinsan yihiin Jose.
Khilaafka ciyaartoyga: Si xun oo aan la jecalysanin ayaa uu ciyaartooyada ula dhaqmaa, Man United na waxa markiiba ay iska hor yimaaddeen oo dhibsaday Marcus Rashford iyo Antony Martial.
Martial waxa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay ciyaartooyada da’da yar ee hibada leh ee ay tahay inay United sii haysato, laakiin waxay u badan tahay inuu ka tago maadaama uu dhibaato badan tirsanayo. Paul Pogba ayaa isaguna dhowaan sheegay in dhibaato u dhaxayso Mourinho. Sidoo kale goolhaye David De Gea ayaa isagana la warinayaa in aanay isku san bannaanayn macallinka.
Shantaas arrimood ayaa waxay keenayaan in Manchester United ay si lama filaan ah ugu dhowaaqo inay shaqada ka caydhisay Jose Mourinho, laakiin lama filayo in hadda uu isbeddel degdeg ahi yimaado.